लकडाउनमा कब्जियतको समस्याले सतायो कि ?
पचास बर्षीय एक पुरुषलाई लकडाउन पछि पाँच सात दिन देखि दैनिक दिसा नलाग्ने, दिसा भए पनि थोरै हुने, पेट फुल्ने ,दिसा गर्न अप्ठ्यारो हुने, पेट भारी हुने, पेटमा ग्यास बन्ने, पेट सफा नहुने ,असपट हुने, शरीर चंगा र छरितो नहुने,पेट कराउने, जस्ता कब्जियतका लक्षणहरु देखिए । कोरोनाको त्रासले आफु भयभित बैचेनी र त ...
1,415 पटक पढिएको
वीपीको आइसोलेसनमा रहेका अयुब मियाँको वयान,‘बसाई राम्रो छ, वाइफाई भइदिए हुन्थ्यो । भोली इदमा खिर मागेका छौं’
म दिल्लीबाट आएको हुँ । हामी १६ जनाको समुह थियौं । सबै हामी एउटै गाउँका थियौं । दिल्लीबाट लुकीछिपी हिडेर दिल्लीको बोर्डर क्रस गर्यौ, र एउटा ट्रकमा आयौं । केचनाकवल बोर्डरमा आएपछि चै नेपाल आउनै पाइएन । सशस्त्र प्रहरीले रोक्यो । आफ्नो देश र घर नजिकै आइपुग्दा आउन नपाउदा दुःख लाग्यो । अर्डर छैन भनेर रोक्य ...
2,291 पटक पढिएको
कोरोनाको संक्रमण नफैलियोस भनेर नेपालमा पनि लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दी गरिएको छ । रोगको महामारी हुँदा शारिरिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने त हुनेनै भयो, साथै मानसिक स्बास्थ्य समस्याको जोखिम पनि बढेर जान्छ । शरीर र मन एक अर्काका परिपुरक हुन । शरिरमा समस्या आउदा मनमा पनि असर पर्छ । साथै, मनमा समस्या आउदा शारि ...
1,335 पटक पढिएको
अबको परिवर्तनले राजनेता जन्माओस्
ती नेताहरू महान हुन् जसले युग परिवर्तनको नेतृत्व गर्छन्, समाजका विभेदकारी जुइनाहरू चुँडाउछन्, संस्कार रुपान्तरणको नयाँ समीकरण बनाउँछन्, आफूआदर्शको शिखर मै रही रहने प्रयत्न गर्छन्, पुँजीवादी साइनोहरूमा गाँसिएर लोभ र धनको मोहमा फस्नु अघि नै मृत्युवरण गर्छन् ।तिनलाई राजनेता हुन् भनेर इतिहासले संझाई रहन ...
1,098 पटक पढिएको
इटहरीका मेयर द्वारिकलाल र सामाजिक बबाल
बेलाबेला बिबादमा आइरहने इटहरी उपमहानगरपालकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरी यतिबेला फेरि बिबादमा आएका छन् । भ्रष्टचारीलाई नछोडने मोही किसानको छोरा, कम्युनिष्टको असल कार्यकर्ता भन्न रुचाउने मेयर चौधरी उपमहानगरको मेयर भएदेखि नै बिभिन्न फण्डाबाजीमा मुछिए । कहिले सरकारी जमिन मिचेर बिल्डिङ बनाएकोमा डोजर लाउने, क ...
1,059 पटक पढिएको
अन्धविश्वास वा आस्था !? बुढासुब्बामा वलि दिएको रगत पखाल्न पानी पर्ने दिन
जनविश्वास भनौं वा अन्धविश्वास, चण्डी पुर्णिमाको दिन जहिल्यै पानी पर्छ भन्ने छ । बिशेष गरि यो विश्वास धरानमा छ । उभौलीको दिन के चलन छ भने यहाँ खासगरी धरानमा यो पर्वको दिन पानी पर्ने चलन छ । मानिसको एउटा अन्धविश्वास पनि छ, कि आजको दिन सधै पानी पर्छ। यो पानी पर्नुको मुल कारण के हो भने यो चण्डी पुर्णिम ...
1,749 पटक पढिएको
3,230 पटक पढिएको
कोरोना महामारीको बेला एनजिओहरु कहाँ छन् ?
जब गरिब भेट्छन्, फोटो खिच्छन र प्रपोजल बनाएर गरिबी निवारणको नाम गर्दै दातृ निकायबाट सहयोग ल्याउछन् । अरुबेला गरिबका दाता बनेर सबै समस्या समाधान गर्ने भन्दै हिड्ने दाताहरु अहिलेको कोरोना भाइरसको यो महामारीमा कहाँ छन् ? यति बेला देश संकटमा छ, गरिबहरु खाद्यान्न अभावमा छन् । दैनिक काम गरेर खाने भुमिहिन ...
1,241 पटक पढिएको
युकेमा घृणित भएर कहिलेसम्म बाँच्ने ?
यो युकेस्थित मेडस्टोनमामा हिजो भूपू गोर्खा सैनिक राम कुमार लिम्बु नाम गरेका नेपालीको गाडीमा केहि अतिवादी गोराहरुले घरमै आगजनी गरीदिएका छन् । उक्त घटना घट्नुको मुख्य कारण कोरोना भाइरसबाट बढ्दो घृणा(हेट क्राइम) नै हो भन्ने जानकारी आएको छ । अहिले कोरोना भाइरसकै कारण हामीजस्ता एसियन मुलका मानिसहरुमा अन ...
प्रकाशित मितिः बैशाख ५, २०७७
12,167 पटक पढिएको
कोरोना महामारीबाट खाद्य संकटमा सुकुम्बासी
यतिबेला संसार कोभिड–१९ अर्थात कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनेको छ । यो भाइरसको प्रभावका कारण हाम्रो देश नेपाल पनि बिगत दुई हप्तादेखि लकडाउनको अवस्थामा छ । विकासको गतिमा प्रतिष्पर्धा गर्दै गरेका विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुलाई समेत घुँडा टेकाई सकेको यो विश्व महामारी नियन्त्रण गर्न हाम्रो देशला ...
1,346 पटक पढिएको